चौथो अंगलाई कस्ले छुने ? - HAMRO YATRA
चौथो अंगलाई कस्ले छुने ?
२० वर्षमा ‘पार्षद–पेन्सन’ हुन्थ्यो भने त्यो पनि नाघेछ । २३ वर्ष भएछ पत्रकार महासंघको पार्षद भएको ।
- वसन्तप्रकाश उपाध्याय
एक पटक केन्द्रीय सचिवको उम्मेदवार भएको थिएँ । प्रिय मित्र केदार कोइराला, धर्मेन्द्र झा र म बीच त्रिपक्षीय असमझदारी हुँदा अर्कैले बाजी मारेका थिए । त्यो घटनाक्रमलाई म किसुनजीको अन्तर्घातमा रोपिएको ‘विद्या–वृक्ष’सँग तुलना गरेर चित्त बुझाउँछु । जो यतिखेर महासंघमा ‘भिमकाय’ परिचयमा उभिएका छन् ।
कसैलाई जिताउन र उठाउन भन्दा हामी ‘हराउन’ उद्यत बन्छौं । अरुलाई ‘चढाउन’भन्दा तल ‘ओराल्न’ हामीलाई आनन्द लाग्छ । आफू आवद्ध प्रेस युनियनका अनेकौं दृष्टान्त र दृष्टिकोण मैले देखेको छु । गाछी–छापे साथीहरुबीचको ‘साथ–साख’ हिजैदेखि आजसम्म गिरेको गिरै छ ।
एकथरी साथी छन् चुनावको ‘ढ्वाङ्’ दैख्नै नहुने । उनीहरुलाई ‘मतपत्र’ छाप्ने हतार भइहाल्छ । बोक्नु पनि कति बोक्नु उनीहरुलाई ? भोट पनि कतिपटक के–केमा लामवद्ध भएर खन्याउनु ? लेख्दै गर्दा मनले गुन्गुनाइरहेछ नारायण गोपलको गीत यसरी: ‘.... मेरो उठ्ने पालो !’
फेरि देखिएको छ दौडधूप साथीहरुको । पेशागत सम्बद्र्धनमा विचार, नीति, सोच, शैली नवीन छैन, नभेट्नुपर्नेलाई पनि भेटेर खिचाइरहेका छन् ‘ङिच्च हाँसेका तस्वीर’ । पर्दा कहिल्यै साथ हुँदैनन् कैयौं । तर, सेल्फीमा समेटिएका देख्छु । एजेण्डामा बहस सुनिँदैन कहीँ, भोड्कामा ‘चियर्स’ सुनिन्छ जहीँतहीँ ।
त्यसो त ‘चुनाव’ अनि बढी लाग्छ हामी पत्रकारहरुलाई । अरुका पत्र–पत्र केलाएर आफूचाहिँ ‘अलपत्र’ मर्म र मान्यतामा महाधिवेशन गर्छौं । एउटा घर छ सिनामंगलमा । दुर्भाग्य त्यहाँ परिवार चिन्तनको आचारसंहिता छैन । कोठा–कोठा र चोटा–चोटामा बाँडिएर ‘झोल–चोक्टा’ नियतिको कार्यशैली हामी देखाउँछौं ।
धेरै अधिवेशनमा गइयो । धेरै भेलामा पुगियो । ‘बन्द सत्र’ले चिन्तन बोक्दैन, बरु ‘गन्ध–सत्र’मा आरोप–प्रत्यारोप छताछुल्ल हुन्छ । मतदाताले ‘विवेक’ हेर्ने गरेको पाइएको छैन । देखिन्छ यत्रतत्र मांस–मदिरा र मादकता मात्रै ।
यसपटक पनि यही हुन्छ जे हुँदै आएको थियो । पत्रकारिताको सर्वहितायमा भन्दा पार्टी–पाल नै टाँगिने छ अधिवेशनमा । चौतारीका दौतरी, प्रेस सेन्टरका मित्रहरु र युनियनका साथीहरु आ–आफ्नै लोरीमा मस्त–मग्न भएर विर्सनेछन् महासंघको महत्वलाई । सबैलाई पत्तो छ राज्यको तीनै वटा अंगलाई निगरानी गर्ने चौथो अंगलाई छुने आँट यहाँ कसैमा देखिएको छैन ।